တရုတ်အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ IFORCE
အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထည့်ခြင်း & အပ်ချုပ်
PP သည်အိတ်များစက်များ၊ စက်များဖြတ်ခြင်း၊ ထည့်ခြင်းနှင့်အပ်ချုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့်စက်ပေါင်းစပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၊ ထည့်သွင်းစက်နှင့်အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်အားကိုချွေတာပြီးအိတ်များကိုလွယ်ကူစွာထုတ်လုပ်သည်။
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် PP ယက်ထားသောအိတ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောစက်ကိုဖြတ်ခြင်း၊ ထည့်ခြင်းနှင့်အပ်ချုပ်ခြင်း
PP သည်အိတ်များစက်များ၊ စက်များဖြတ်ခြင်း၊ ထည့်ခြင်းနှင့်အပ်ချုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့်စက်ပေါင်းစပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၊ ထည့်သွင်းစက်နှင့်အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်အားကိုချွေတာပြီးအိတ်များကိုလွယ်ကူစွာထုတ်လုပ်သည်။ PP အိတ်အမျိုးမျိုး၊ ဓာတုအိတ်များ၊ မုန့်ညက်အိတ်များ၊ ဆန်အိတ်များ၊ အိတ်အိတ်များ၊ BOPP ပုံနှိပ်အိတ်များနှင့်ပုလဲဖလင်အိတ်စသည်ဖြင့်ကိုက်ညီသည်။
လျှောက်လွှာအတိုင်းအတာ - အလုပ်သမားများသက်သာစေရန်အိတ်များခင်းထားရန်လိုအပ်သည်။
3.It သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ တပြိုင်နက်တည်းဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသောအိတ်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအကျိုးရှိစွာဖြစ်ကြသည်
4.Position controller နှင့်အရောင်ရှာဖွေစက်သည်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေသည်။
မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမှိုဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆခေါက်အစွန်း, ယူနီဖောင်း edgefold, ချည်ကြီးစွန်း၏အရှည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
အကျယ် - ၁.၅ စင်တီမီတာ - ၂ စင်တီမီတာ (သို့) ၁.၇ စင်တီမီတာ - ၃ စင်တီမီတာ (အခြေခံသောဂျီအက်စ်အမ်) အကျယ်၏အကျယ်ကိုချိန်ညှိရန်လွယ်ကူသည်။
၉။ ခိုင်ခံ့သော roller များ (berings) များသည်အိတ်များကိုနောက်လုပ်ငန်းစဉ်သို့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေနိုင်သည်။
10.Photoelectric switch ကို, C1 ကို C2
11. ဤစက်တွင်မတူညီသောနံရံအမြန်နှုန်း၊ အပြတ်အသတ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောသံလိုက်မော်တာများတပ်ဆင်ထားသည်
12. လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး။ စက်ကို PLC ကွန်ပျူတာဘုတ်မှထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ PLC မော်နီတာမှတစ်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြသခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလူတစ် ဦး မှလည်ပတ်စေပြီးလုပ်အားကိုသက်သာစေသည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်း & နံရံ & အပ်ချုပ်
အကျယ်, 300-750mm, အရှည် 400-1250mm
PP အကျယ်ထက် 20mm ပိုကြီးသည်
၂၅ မှ ၃၀pcs / min (ပစ္စည်းအခြေအနေအရ)
6400 * 4300 * 1700mm
1.PP လိပ် unwinding ယူနစ်
3.PE လိပ် unwinding ယူနစ်
ယူနစ်ထည့်သွင်း 4.PE လိပ်
အီလက်ထရောနစ် photocell မျက်လုံးပုံရိပ်
ရှေ့သို့ အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် PP ယက်ထားသောအိတ်များပေါင်းစပ်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း
နောက်တစ်ခု: PP Raschel အိတ်များ
PP ပြားချည်မျှင်ထုပ်ခြင်း (စက္ကူအိတ်များ)